Izicelo ezintathu ze-Android zokulawula imirhumo yakho | I-Androidsis
Kule mihla kuqhelekile ukuba abasebenzisi banemirhumo kumaqonga amaninzi. Cinga ngeapps ezinje ngeSpotify, iNetflix kunye nezinye ezininzi, ohlawula kuzo imali ngenyanga xa uzisebenzisa. Ngale ndlela, kuya kufuneka ube nolawulo olufanelekileyo lokurhuma. Ukuze uyazi ngawo onke amaxesha ukuba zeziphi onazo, kunye nokuba kukho nantoni na ofuna ukuyirhoxisa kwi-Android.
Le yinto enokwenzeka ukuyenza ngeGoogle Play, njengoko sele sibonisile. Nangona kwi-Android sinothotho lwe izicelo zoncedo olukhulu kule nkalo. Enkosi kubo kunokwenzeka ukulawula oku kubhaliswa okusebenzayo nangaliphi na ixesha. Ke umsebenzisi unolawulo phezu kwabo.
Ngokuhamba kwexesha bahambile ezivelayo uninzi lweziapps kwiVenkile yokudlala. Kukho okuninzi okunesandi esiqhelekileyo kuwe, kodwa kukho ezinye ezime ngaphandle kwezinye. Ke ngoko, ezi zintathu iiapps esizikhankanyileyo ngokungathandabuzekiyo zezona zigcweleyo kule ndima. Baza kukuvumela ulawulo olululo kwi-Android, ngendlela elula.
Ukudlala kukaGoogle sele kwenza kube lula ukukhansela imirhumo
Siqala ngesi sicelo se-Android, esinokuvakala njengabasebenzisi abaninzi. Kwabaninzi sesinye sezona zicelo zibalaseleyo ezikhoyo namhlanje xa ulawula imirhumo evela kwi-smartphone. Enye yeenzuzo ezinkulu zikaNate kukusebenziseka ngokulula. Ine-interface elula kakhulu ukuyisebenzisa, evumela ukusetyenziswa kwayo ngawo onke amaxesha. Kuba umsebenzisi unokubona ngokulula ukuba yeyiphi imirhumo anayo ngalo mzuzu.
Omnye umsebenzi onomdla omkhulu kukuba ikuvumela ukuba wenze imirhumo yesiko. Ke banokuchongwa ngokusekwe kumbala okanye ngokusetyenziswa kweempawu. Into enceda abasebenzisi ukuba babaphathe ngcono kwifowuni yabo. Nangona lo msebenzi uthintelwe ngohlobo lwasimahla lweapp. Ke ngoko, ukuze ufumane uninzi kuNate, kuya kufuneka ubheje kuhlobo oluhlawulelweyo. Kodwa umsebenzisi ngamnye kufuneka ayiqwalasele, ngakumbi ngokuxhomekeke kwinani lemirhumo abanayo.
Ukukhuphela esi sicelo kwi-Android simahla. Nangona sinokuthenga, ukufikelela kwimisebenzi eyongezelelweyo. Benza ukhetho ngamaxesha onke.
Umthuthukisi: Zuza ngokulungileyo
Isicelo esivakala ngokuqinisekileyo kubasebenzisi abaninzi. Kuba yenye yeefayile ze- ezona zixhobo zilungileyo kwi-Android xa kuziwa kulawulo lweendleko. Ke ngoko, inokusetyenziswa kule ngqondo xa kufikwa kulawulo olufanelekileyo lwemirhumo esebenzayo ngalo mzuzu ngendlela elula. Kule ndawo yenye yezona zicelo zigqibeleleyo, kuba ikuvumela ukuba ube nembono epheleleyo yengeniso kunye nenkcitho.
Ke sinako ukugxila kwinkcitho yokurhumela ngendlela elula kwaye ke sinolawulo olungcono kubo kwi-smartphone yethu ye-Android. Yindlela yokuthatha ithuba elingakumbi kwimisebenzi enikezelwa ngabasebenzisi. Kuba inonxibelelwano oluhle, Kulula kakhulu ukuyisebenzisa, ngokungathandabuzekiyo yenza ukuba ibenolungelelwano kubasebenzisi abaninzi kwinkqubo yokusebenza. Ukongeza, asinakho ukuyisebenzisa kuphela ngokurhuma, kodwa singayisebenzisa ngokubanzi nangakumbi ngalo lonke ixesha.
IFintonic sisicelo sokuba inokukhutshelwa simahla kwi-Android. Ngaphakathi kwayo kukho iintengiso. Azicaphukisi kakhulu, ke uya kuba nakho ukusebenzisa i-app ngokukhululekileyo ngalo lonke ixesha. Nangona ngamanye amaxesha kukho intengiso ecaphukisayo.
Indawo yeFintonic | Gcina kunye nezemali
Umthuthukisi: IFintonic Servicios Financieros SL
Igama lesi sicelo lenza icace gca ukuba isebenza kanjani. Yisicelo esizinikezele ngokukodwa ukuvumela abasebenzisi a ulawulo olufanelekileyo lwemirhumo yakho esebenzayo. Indlela elungileyo yokulawula kunye nokulawula zonke zisuka kwi-Android. Kwakhona, yinto efanelekileyo kakhulu kule ndlela. Ngokukodwa kuba ine-interface elungileyo, eyenza ukuba kube lula kakhulu ukuyisebenzisa.
Iphefumlelwe yoyilo lwempahla xa kusenziwa olujongano, ngokungathandabuzekiyo yeyona ikhululekile kwaye kulula ukuyisebenzisa kumntu wonke. Yonke ibonwa kakhulu, ekuvumela ukuba ubenolawulo olufanelekileyo lwerhafu esebenzayo ngalo mzuzu ngaphandle kweengxaki ezininzi. Ukongeza, inemisebenzi emininzi eyongezelelweyo, eyenza ukuba ibe lukhetho olupheleleyo kule ndima. Kuba unokwenza imirhumo yesiko, eya kuthi ivumele ulawulo olungcono, phakathi kweminye imisebenzi. Sinokusebenzisa iintlobo ezininzi zeemali kuyo.
Ukukhuphela esi sicelo kwi-Android simahla. Ukongeza, ngaphakathi kuyo akukho nto ithengwayo okanye iintengiso zalo naluphi na uhlobo. Ungayisebenzisa kwaye uyonwabele yonke imisebenzi yayo ngaphandle kokuyihlawulela imali.
Imirhumo-Lawula iindleko zakho eziqhelekileyo
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Izicelo ze-Android zokulawula kunye nemirhumo yakho
Iimaphu zikaGoogle zikuvumela ukuba uxele ukugcwala kwezithuthi ngesandla